Dhaamsaa ifaa fi Bilisaa obboo Abba Dulaa Gamadaaf !!
Kabajamoo obboo Abba Dulaa Gamada Ano jiba dhuunfa siira hin qabuu, Junedin Sadoo fi Kuma Damaqisaa irra ni woyyita, Oromoo qulquluu ta'uu kee kan dubatuu ilee ana qoofa, yoo Nafxanyoon Moofan Oromootti dulaani ilee jaajjaalatu dhuma OPDO birra akkan dhabadhuu 100% amanta, maliif namoon beekumsa ga'aa qaban fi sii beekan utuu jiran, ijoolee dhimma sana hin beekne Belgiumn jiran dubifte deebi’uun maliifi?, dhimma paarlamaa ilee anatuu yaada siif keenuu danda'a. Waan Oromoo gargaruu amoo yeeroo hunda yaada ijaraan qaba, Misoommni Oromiiyaa akka shafisuu irratti yoon sii tumsee malee sii hin moormuun ture. lafa kana irra Oromoo dinaa hin sodane dura dhabbate dhugaa itti dubatu ana ta'uu koo atuu ragga naa batee jirta. Gaafa wa’ee Teesoo Finfinnee gara Addamaati jijiruun wal qabatee Junedi Sodatuun Melesein Sodate Oromoo hunda irratti dulee, ana ammo maatii koo hunda baleseefu dulaa ana irratti labsee waranaa humna dafee qaqabaa natti erge. Ati garu Junedin Sadooti Bilbiltee Dr. Getachewn diina yoo jeete Haatii mana Dr. Getachew Jigi Maliif yaakka tokko malee minda ishee dhorkachuun siirii miti jetee mindaan ishee akka keenamuf goote kanaaf imoo galataa qabda. Garu Junedin dhummatii haadha mana isaa hidhatii dhisee baqatee kanaaf siin woyya. Ani Dabeessa hin jaaluu na beekta, Gaafa Qinjitii Bilaa Kuma 35 bitatee anilee isiin wajjin Oromoo tokkumman hiriirsine Farda irra yaasuuf qoophi akka tane siti himen ture wajjira Kee keessatti.
Garuu Waarabesii waan halkan hojeetee beekaaf guyya nama dheessa, Bofii ilee suumii hama waan qabuuf lafa irra akka lo'uu goodhamee, namiin dhufuu qabuu dura qana'aa jeedhama, namoota wa’ee Oromoo beekan hunda ifaatti dubsuu dhifitee nama murasaa dhoksaan duubisuun kee sababa qaba.
1. Jarii Tigire kara Embassy isaan fi Ijoolee Oromoo hundan na dubsuu yaalani akka dadhaban waan siti himaniif ta'aa;
2. Yakka Baratoota Oromoo irratti dalagamee fi dhiiga baratoota Oromoo dhangala’ee akka onnee koo irra danfaa jiruu lapheen kee ni beeka, isaa kana ammoo Brusselsiti miti Finfinneetuu isiin dura akkan dhaabbadhu ni beekta,
3. Lafa Oromoo samame fi samaamaa jiru, keesuumatii Master Plani Soba, akka hangan du’uutin akka isiin mormumu ni beekta,
4. Ani Bilisummaa Oromoo waan feedheti akkan hin jijjiree TPLF waan beektuuf, lafaa nannoo Finfinnee Tigiren akka gugurachuuf deemtuus siin amansiisa ture.
Bakkka Embasii Ethiopia sana irra kasee KM 5 booda Magaloon Jiran Mootummaa Filamish (Vlaanderan) jala jiru. Ijoolee hubannoo siyyasaa ga'aa hin qabne dubifte deemun kee siif salphina. siif chalenge woyya ture waan heedu Brussels irra barata turte, (Fifinfinnee fi Brussels, Oromoo fi Flamish) seenan isaa wal fakata. Siila nami Gudan Oromoo bakka bu'een jira jeedhuu waan saba isaaf bu'aa busuu barateee deema malee ilman Oromoo walala biyya keessa fi biyya alatii eribata diinaf qoophessa miti. Obboo Tashome Toga ni beekta Ethiopia keessatti Sodatan 1faan isaa, warii Eritrea garuu sodata 1faan Melese Zenawi nan jeedhan. Mee qormata xiiqoon siif keena Rakkoo uummataa Oromoo furuuf yoo barbadee Maaster Plani atii siiridha jeete Oromoo baleesuuf demuu dura dhabachuu qabda. OPDO keessa Dhiirri dhiira caaluu Alemayo Atomsa ta'uu isaa Hassan Alii qoofa utuu hin tanee Miseensoon OPDO million 3.5 hundi ragga ba'uu, sababin isaa qofaa isaa wa’ee lafa Finfinnee irratti falmachaa ture gaafa inni du’u murteen wa’ee master plani asi ba’ee. Abba Dulaa silaa du'ii hin oluu Tigire Oromooti xabaachiiftan hin du'iina ykn hin baqatiina, nuu iyuu isiin irratti lola TPLF of irra lola.Yoo Nafxanyan Moofan isiinti ka'ee immoo hundii keenya isiin bira dhabanee tokko tanee Farda isheera yaafna.
Bilisummaa Oromoo Ani Angoo, Fayyida fi Mallaqaatii hin gurguradhu, Diasporan lafa km200ti Bilisummaa gurgurutti amanun kee of gowomsudha. Diaspora Dhiigaa Baratoota Oromoo irratti dhichiftee Nyata isiin birra nyatee deebitee irra nama haqaa fi isiin mormuu isiin wayya, gantuun gantuu dha, Oromoon abba biyya Ethiopia ta'uu qaba. Abban Dula Maliif Mummicha Ministera Ethiopia hin tanee? Hanga yoomiti bitmatan uumataa keenya siirna bitaa Tigire jalati bulchituu? Tigiren maliif Oromoo tufatii OPDOtu nu Tufachisee ABOn Tigire akka qorqorotii ilaala,
OPDOn uummataa keessanfi yaada. Baratoota Oromoo Digiiri qabatee Mana teesisuf ilaala, Haadhamana keessan salfadha, egeree ijoolee keessan ilaala.
Ani nama lafaa irra deemu mitii waan tokko ilee hin sodadhuu akka ijoolee Belgium itti Kitaba Qulquluun gowomistani anans naa gowomsuu hin dandessan, ani adunya kana irra waanan sodadhuu hin qabuu, ana miti ijjooleen koo ilee soda fi namaf gugufuu hin beekan, Furmaati jiruu TPLF/OPDO buqisuu qofaa.
Getachew Jigi Demeksa /PhD.
Parliamentarian, Federal Democratic Republic of Ethiopia and
Chairman of the Oromo Parliamentarians Council
GSM +32(0) 488 47 93 60 skype gadaa.oromoo ,
Facebook: gummi paarlamaa Oromoo
Email personal getachew.jigi@gmail.com